जनतापाटी आइतबार, पुस १३, २०७६ मा प्रकाशित
स्थानीय सरकारहरु अहिले धमाधम आफ्नो क्षेत्रलाई ‘मगन्तेमुक्त’ क्षेत्र बनाउन लागि परिरहेका छन् । त्यसको लागि देशका थुप्रै स्थानीय निकायले सांझ परेपछि ‘सडकमा अप्रेसन’ चलाइरहेका छन् भने त्यसक्रममा सडकमा सुतेकाहरुसंग नोटको बिटो भेटिएको देखि सुरक्षा निकायकै अधिकारीहरुलाई हतियार देखाएर धम्काएको सम्मका थुप्रै रमाइला परिदृश्यहरु देखा परेका समाचारहरु संचारमाध्यममा आइरहेका छन् ।
यत्रतत्र भेटिने मगन्ते र सडक पेटीमा पाल नै टांगेर बस्नेहरुले शहरको कुरुपता मात्र बढाएका छैनन्, सुरक्षाको चुनौति पनि थपिरहेका छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । काठमाण्डौकै कुरा गर्दा पनि कमलादी गणेशस्थान जस्तो शहरकै मुटू मानिने क्षेत्रको सडक पेटी कब्जा गरेर पाल नै टांगेर मगन्तेहरु बसिरहेका थिए । त्यसले गर्दा एकातर्फ यात्रुहरुलाई अफ्ठारो मात्रै भएको थिएन, सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाइरहेको थियो । त्यसमाथि उनीहरुले मदिरासेवन गरेर गर्ने होहल्ला र अश्लिलताको प्रदर्शनले त्यसक्षेत्रको वदनामी गराइरहेको थियो । तिनीहरुलाई त्यहांबाट हटाइएकोले अहिले त्यस क्षेत्रको अवस्था नै परिवर्तन् भएको छ ।
यसरी झट्ट हेर्दा सडकलाई ‘मगन्तेमुक्त’ बनाउनु वा सडकलाई नै थात थलो बनाउन खोज्नेहरुलाई हटाउने पहल गर्नु अत्यन्त सकारात्मक देखिन्छ । र, यसले सरकारी पदाधिकारी र स्थानीय निकायहरुको लोकप्रियता पनि तत्कालको लागि बढेको देखिएको छ ।
तर, मुख्य कुरा अहिले अपनाइएको शहरलाई मगन्तेमुक्त बनाउने अभियानले सांच्चै नै दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्छ ? यो अभियानको अन्तर्य के हो ? कुनै पनि मान्छे माग्ने किन हुन्छ ? सडकमै वसोवास गर्ने अवस्थाको सृजना किन हुन्छ ? अहिले जर्वजस्ती सडकबाट हटाइएका मानिसहरु फेरि केही समय पछि सडकमै आउंदैनन् वा एक ठाउंबाट हटाइएका मानिसहरु अर्काे ठाउंमा गएर वस्दैनन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी के छ ? यस्तो अभियानले देशको समाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा कस्तो असर पार्छ ? यसबारेमा भने सरकारी पक्षले गंभिरताका साथ ध्यान दिएको पाइदैन ।
केही अपवादलाई छोड्ने हो भने कुनै पनि मान्छे रहरले मगन्ते हुंदैन । सडकको वासिन्दा वन्दैन । त्यसका पछाडि उसको आर्थिक अवस्था मुख्य कारण हुन्छ । ‘ठूलो मान्छे बन्ने’ महत्वाकांक्षासहित काठमाण्डौ लगायतका शहरमा छिरेका तर राज्यको गलत नीतिका कारण आफ्नो भविश्य सुनिश्चित गर्न नसकेका वा ठगको फन्दामा परेर बिल्लीवांठ भएपछि सडक पेटीलाई आश्रय बनाउन वाध्य भएकाहरु थुप्रै भेटिन्छन् ।
यसको अर्थ के हो भने राज्यले सांच्चै नै गरिब निमुखा मानिसहरुलाई लक्षित गरेर उनीहरुका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने हो भने सडकका वासिन्दा वा मगन्ते समस्या आफै समाधान हुन्छ । त्यसैले अहिलेको पहिलो र मुख्य कार्यभार नै राज्यले गरिबी उन्मूलन र रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि अधिकतम प्रयास गर्नु हो ।
यदि सांच्चै गंभिर भएर संघिय र प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारहरु यी दुईवटा काममा केन्द्रित हुने हो भने केही वर्ष भित्रमा देशबाट मगन्तेहरुको संख्या निकैहदसम्म कम हुनेछ । यदाकदा रहरले मगन्ते हुनेहरुलाई राज्यले कारवाहीको दायरामा ल्याएर समस्या समाधान समाधान गर्न सक्छ । त्यसमाथि सवारी चालकहरुले ‘मापसे’ गरेर गाडी चलाउन नपाउने खालको जस्तै नियम सडकका यात्रुहरुमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।
‘मापसे’ गरेर हो हल्ला गर्नेहरुलाई पनि नैतिकताको पाठ पढाउंदै केही घण्टा भए पनि सुधारगृहमा वसाल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बल्ल सडक क्षेत्र वास्तविकरुपमा सुरक्षित हुनेछ । महिला र वालबालिकाहरुमाथि हुने यौनजन्य हिंसाहरु पनि निकै हदसम्म कम हुनेछ ।
पूंजीवादी भनिएका युरोपेली मुलुकहरुले यस्तो अभियान संचालन गरेर आफ्नो देशलाई सुरक्षित र सम्वृद्ध बनाइरहेका छन् भने ‘समाजवादउन्मूख’ देश नेपालले त्यस्तो गर्न किन सक्दैन ? अहिलेको लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यो ।